Dibadbax loogaga soo horjeedo falalka kooxaha burcada oo Göteborg lugu qabtay | Somaliska
Magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee dalkaan Iswiidhan ayaa maanta waxaa ka dhacay mudahaaradyo loogagag soo horjeedo falalka ammaan xummo ee magaaladda ay in dhawaale la daala dhaceeysay.
Banaanbaxan oo ay soo qaban qaabiyeen urruro iyo shabakado isbiirsaday oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee bulshadda. Banaanbaxan ayaa ujeedadiisa waxaa uu ahaa mid lugu taageerayo deganaan iyo ammni in ay ka jiraan magaaladda Göteborg gaar ahaan xaafadda ajaanibtu ku badan tahay. Wuxuu sidoo kale ahaa mid lugu baroordiiqayo dadyowgii sida kala duwan ugu dhintay falalka ay geeystaan kooxaha kiriminaalka ah. Siyaasiinta gobolka iyo urruradda u dhaqaaqa ajaanibta oo maanta ka qeyb galay ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday urruro iyo siyaasiin soomaali ah. Kuwaas oo qudhooda door weyn oo muuqda kaga jira siddii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka xagga is dhexgalka iyo suuqa shaqada ka heeysta soomaalida.
“Xilliga qaboobaha ayaan dib igu soo laaban doonaa, anoo siyaasiinta gobolka ingoo u gudbin doona hinside iyo sharuudo wax looga qaban doono ammaan xumadda” ayuu yiri Karwan Faraj oo ka mid ah dhaq dhaqaaqyadii banaanbaxan wax ka soo qaban qaabiyey.som uppskattade att det var omkring 700 deltagare i tåget från Götaplatsen.
Cali Yare Gaani, waa mid ka mid ah mdaxda urrurka Neutrala Ungdom ee ka dhisan xaafadda Hisingen ee Göteborg.
Wax garadkii halkaasi ka hadlay ayaa doonaya in xaafadaha ajaanibta loo helo qorsho wax looga qabanayo dhinacyada ay ka mid yihiin amaanka, waxbarashada iyo shaqada oo ay sheegeen inaan xaafaduhu la mid aheyn xaafadaha kale ee magaaladda kana liidato. Banaanbaxani ayaa ah kii labaad ee lugu qabto magaaladda tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii lugu qaaday maqaayad ku tiilay xaafadda Hisingen oo ay ka dambeeyeen dhalinyarro dhalinayro soomaali ah. sanadkii 2015-tii.